Faransiiska iyo Spain oo dalalkooda ku soo rogay tallaabooyin ay ku xakameynayaan feyraska Koron | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Faransiiska iyo Spain oo dalalkooda ku soo rogay tallaabooyin ay ku xakameynayaan...
Faransiiska iyo Spain oo dalalkooda ku soo rogay tallaabooyin ay ku xakameynayaan feyraska Koron
Dowladaha Faransiiska iyo Spain oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa dadkooda ku soo rogay bandow ay qeyb ahaan ku xirayaan dhaq-dhaaqa dadka si looga hortago fiditaanka feyraska Korona.
Faransiiska oo dadkiisa lagu qiyaaso 63.5 milyan oo qof ayaa albaabada isugu dhufatay dhammaan goobaha ay bulshada isugu timaado ee aan daruuriga ahayn sida goobaha lagu nasto iyo maqaayadaha laga bilaabo Axadda maanta ah.
Spain oo iyaduna dadkeeda lagu qiyaaso 46.7 milyan oo qof ayaa bandow ku soo rogtay dhaqdhaaqa dadweynaha ku nool dalkeeda.
Haweeneyda u dhaxda ra’iisul wasaaraha Spain Begoña Gómez ayay waaxda caafimaadka Spain si rasmi ah u shaacisay in ay qabto feyraska Korona.
Spain ayaa noqotay dalka labaad ee qaaradda Yurub hoy u noqday feyraska Korona marka laga soo tago Talyaaniga.
Spain waxa ay diiwaan gelisay geerida 191 qof oo u geeriyooday caabuqa Korona iyo 6046 qof oo haatan xanuunka la daalaa dhacaysa.
Talyaaniga oo feyraska dartiis ay ugu geeriyoodeen dad ka badan 1,440 qof ayaa Isniintii hore ku dhawaaqay bandow uu ku soo rogay dalkiisa oo idil.
Ra’iisul wasaaraha Faransiiska Edward Flip ayaa sheegay in ay sii kordheyso tirada dadka ay xaaladdoodu adagtahay ee qaba feyraska taas oo uu sheegay in ay ugu wacantahay in dadweynuhu ay dhagaha ka fureysteen digniinihii loo diray.
Hadda dowladda Faransiiska ayaa gabi ahaanba bandow ku soo rogtay maqaayadaha, shineemooyinka, goobaha lagu caweeyo iyo kuwa lagu nasto sidoo kale dowladda ayaa joojisay dhammaan howlaha aan daruuriga ahayn oo idil.
Bandowgan ma saamayn doono dukaamada lagu iibiyo cuntada, kuwa lagu iibiyo dawada, bangiyada, iyo kaalimaha shidaalka.
Ra’iisul wasaaraha Spain Pedro Sánchez ayaa isagu ku dhawaaqay bandow isaga oo dadka dalkiisa amar ku siiyay inaanay ka soo bixi karin guryahooda marka laga reebo marka ay soo iibsanayaan cunnooyinka iyo waxyaabaha nolosha daruuriga u ah.
Waxaa albaada la isugu dhuftay dhammaan matxafyadii dalka iyo goobihii cayaraaha.
Bangiyada iyo kaalimaaha shidaalka ayaa iyagu furnaan doono iyada oo ay xusid mudantahay in kal hore albaabada loo laabay dhammaan iskuullada dalka Spain.
Xaaladda degdegga ah ee Spain ayaa sii socon doonto muddo laba todobaad ah iyada oo haddii laga maarmi waayo la sii kordhin doono kaddib oggolaanshaha golaha baarlamanka.
Spain ayaa diiwaan gelisay tan iyo jimcihii 1800 oo kiis oo Korona ah kuwaa oo badankood laga helay caasimadda Madrid.
Previous articleWasaaradda Caafimaad oo shaacisey qorsho ka dhan ah Cudurka Carona
Next articleDhageyso: Bulsho weynta ku nool magaalada baydhabo oo kahadleen faafitaanka cudurka Coronovirus